ဘာသာစကား ၂၄ ခုကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော Myanmar Online Dictionary | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ဘာသာစကား ၂၄ ခုကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော Myanmar Online Dictionary
ဘာသာစကား ၂၄ ခုကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော Myanmar Online Dictionary
Posted by we R one on Sep 1, 2011 in Computers & Technology, Copy/Paste, Software & Links | 12 comments
internet IT knowledge Sharing knowledge
အွန်လိုင်း အဘိဓါန်လေးတစ်ခုပါ.. ဘာသာစကား ၂၄ ခုကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဆိုဒ်တည်ထောင်သူတို့ရဲ့ ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုက “မြန်မာတို့ အတွက် အသုံးဝင်သော အင်တာနက် အဘိဓာန် တစ်ခုဖြစ်ရန် နှင့် လိုချင်သောသူများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် အနက်ဖွင့် နိုင်သော အင်တာနက် စကားလုံး အလုပ်ရုံ ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ညွှန်း ထားပါတယ်။..” တဲ့..။
website address က http://www.myordbok.com/dictionary ဖြစ်ပါတယ်။ web site ကိုဝင်လိုက်ရင် အောက်ကအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
အဲဒီမှာ more language to myanmar ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အောက်မှာ ပြောင်းလို့ရတဲ့ ဘာသာတွေ ကျလာပါမယ်။
အဲဒီထဲက ကိုယ် translate လုပ်ချင်တဲ့ ဘာသာကိုရွေးပါ။ ကျွန်တော်က ဂျပန်က နေပြောင်းချင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Japanese to Myanmar ကို အရင် နှိပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် text box မှာ ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ ဂျပန်စာကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် Google It ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ ဂျပန်စာကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ပြီး ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့တောင် ပြထားပါသေးတယ်။
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ ….. ကျွန်တော်တောင် သိတာမကြာသေးဘူး …. မသိသေးတဲ့သူများ မြန်မြန်သာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ ….. လက်လွှက်လို့မရတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ ….. ကော်ပီ တောင် ရတယ် မိမိသိချင်တာကို စလပ် လိုက် ကော်ပီ လုပ် အကွက်လေးထဲမှာ ပေ့ လုပ်ပြီး ရှာလို့လည်းရတယ် ….. မသိတဲ့လူတွေကျော်မသွားနဲ့နော် ………………….
thanksalot , I will try.
Thanksalot. Very useful website.
သေချာစမ်းဦးမယ်ဗျာ…။ အခုထိတော့ အဆင်ပြေနေသေးသဗျ..။ ကျေးဇူး
အဆင်ပြေနေတယ်ဗျို့ ။ ကျေးဇူးပါ။
အရမ်းကောင်းဗျာ… ဂွတ်ရှယ်ပါပဲ….ဂိုမတ်စ် စီမီတာ.. :D
မြန်မာတူအင်္ဂလိပ် ကောမ၇ှိဘူးလားဂျာ….ဂှီတော် အင်္ဂလိပ် မြန်မာကတောမ၇ဘူးရယ်နော်
ဧရာ လှိုင်း says:
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဗျာ… တောသားတွေအတွက်တော့ အတော်အသုံးဝင်တာပဲလေ..